कांग्रेसको कार्यसमिति चयनका लागि मतदान
काठमाडौं, २६ चैत ।कांग्रेस संसदीय दलको कार्यसमिति चयनका लागि मतदान भइरहेको छ । सिंहदरबारस्थित कंग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा विहान ९ देखि १२ बजेसम्म विद्युतीय प्रणाली मार्फत मतदानको समय तोकिएको छ । समानुपातिक समावेशी कोटाबाट १४ र प्रदेशबाट ७ गरी २१ सदस्यका लागि ४१ जना चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् । पिछडिएको क्षेत्रको एक पदमा भने राजीवविक्रम शाह […]
Posted in मुख्य समाचार Read More »
बैद्यलाई छाड्दै बादलको नेतृत्वमा पार्टी एकता हुने
काठमाडौंं, २५ चैैत । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीभित्रको विवाद नयाँ मोडमा पुगेको छ । १२ गतेदेखी जारी केन्द्रीय समितिको बैठकमा एकिकृत माओवादीसंग एकता अनिवार्य रहेको बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुले धारणा राखेपनि पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्यले नमानेपछि पार्टीमा विवाद देखिएको हो । बैद्यले शुरुदेखि नै विचारको प्रश्न अघि तेस्र्याउँदै एमाओवादीले आफूले भनेका कुराहरु नमानेमा एकता हुन […]
कर्णाली जलबिद्युत परियोजनाको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न माग
काठमाडौंं, २५ चैैत । माथिल्लो कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियान केन्द्रिय समितिले ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमता बोकेको माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत परियोजनालाई ९ सय मेगावाटमा खुम्च्याउने काम गरिएको भन्दै भारतीय कम्पनी जिएमआरसँगको सम्झौता(पीडिए) तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । बिहीबार रिपोर्टर्स क्लबमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्णाली बचाऔं राष्ट्रिय अभियानले परियोजनाको क्षमता मुताविक सरकारले […]
बिश्व फिफा बरीयतामा पहिलो को ? नेपाल कतिऔं स्थानमा ?
एजेन्सी,२५ चैत । फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले अप्रिल महिनाको लागि जारी गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल ६ स्थान माथि उक्लँदै १ सय ७९ स्थानमा पुगेको छ । ६ स्थान फड्को मारेको नेपाल दक्षिण एसियामा चौथो स्थानमा छ । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान सबैभन्दा माथि १ सय ४७ औं स्थानमा छ । माल्दिभ्स १ सय ६० औं, भारत […]
राष्ट्रको स्वतन्त्रतालाई अझै सुदृढ गर्ने -प्रचण्ड
काठमाडौं, २५ चैत । एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रको स्वतन्त्रतालाई अझै सुदृढ गर्ने काममा लागेको बताएका छन् । पार्टी केन्द्र्यि कार्यालय , पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा आयोजीत पोष्टबहादुर बोगटी स्मृति प्र्रतिष्ठानको प्रारम्भीक साधारण सभालाई आज सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्राप्त उपलब्धीको संस्थागत गर्ने, जनवादी क्रान्तिको बाँकी कार्यभार पुरा गर्दै समाजवादी क्रान्तिको […]
Posted in मुख्य समाचार,राजनीति मुख्य Read More »
युरोपियन च्याम्पियन्स लिग-रियल मड्रिड पराजित
काठमाडौंं, २५ चैैत । युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगितामा स्पेनको रियल मड्रिडलाई जर्मन क्लव उल्फवर्गले पराजित गरेको छ । बुधबार राती आफ्नै मैदानमा भएको क्वाटरफाईनल पहिलो लेगको खेलमा उल्फवर्गले रियाल मड्रिडलाई २-० ले हराएको हो । खेलमा उल्फवर्गलाई विजयी गराउन रिकार्डो रोड्रिग्वेजर म्याक्जीमीलीयान आर्नोल्डले एक एक गोल गरे । जिततसँगै उल्फवर्गले सेमीफाईनल पुग्ने संभावना बलियो […]
Posted in खेल,मुख्य समाचार Read More »
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव -छैैन
काठमाडौंं, २५ चैैत । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सम्भव नभएको बताएका छन् । झापा क्षेत्र नम्बर ३ मा आयोजना हुन लागेको एमाले प्रशिक्षण कार्यक्रमका लागि झापा आएका पोखरेलले अहिले मिलीजुली सरकार आवश्यक नरहेको बताए । प्रेस चौतारी झापाले बिर्तामोडमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले आफ्नो अग्रसरतामा संविधान जारी गरेको […]
माओवादी आन्दोलन पुनर्गठन नगरेसम्म आफु नथाक्ने –प्रचण्ड
काठमाडौं , २४ चैत । Ø पार्टीमा गुट उपगुट अन्त्य हुनुपर्ने , पुर्व समूह भनेर व्याज खान नपाउने। Ø अब पार्टीबाट हुने नियुक्तिहरुमा शहिद र बेपत्ता परिवारका छोराछोरीलाई मात्र पठाईने । Ø शहिद र बेपत्ता परिवार ,घाईते तथा अपांग कार्यकर्ताको उपचारका लागी अक्षयकोष समेत छिट्टै स्थापना गरिने। एकिकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले माओवादी […]
अधिकारको होइन, आर्थिक क्रान्तिको लडाईं गरौं‐ उद्योगमन्त्री
विमला अधिकारी लमजुङ्ग, २४ चैत्र / उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेले संसारकै उत्कृट संविधान नेपालले पाएसँगै अब अधिकारको लडार्इं सकिएको बताएका छन् । देशलाई आवश्यक लडाईं भनेको केवल मुलुकको आर्थिक र औद्योगिक क्रान्तिको भएको मन्त्री पाण्डेको थियो । बुधबार प्रथम बेशीसहर महोत्सवको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पाण्डेले भने“ अब मुलुक आर्थिक समृद्धि तर्फ अघि बढेको छ । हामीले […]
मलेसियामा यसरी लुटीन्छन् नेपाली युवक
मलेसिया, २४ चैत । मलेसियन समय अनुसार १८ : २० मा गोर्खाजिल्ला बोर्लाङ गा.बि.स मा घर भइ हाल मलेसियाको भाइपर फोर्स सेक्युरिटी कम्पनीमा बिगत चार बर्ष देखि कार्यरत कुमार श्रेष्ठ आफ्नो डिउटी सकेर होस्टल जाने क्रममा बाटोमा हिडदै गर्दा पीडित कुमार श्रेष्ठको अगाडि एक्कासि एउटा कार आएर रोकियो।कार बाट तीन जना तमिल केटाहरु ओर्लिएर हामीपुलिस […]
Page 706 of 720« First«...102030...704705706707708...720...»Last »